Sidee loo dhisi karaa Gunnada Shirkadaha - Dhisidda Gunnada Ganacsiga
Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan amaahda shirkadaha, sameynta astaan ​​ganacsi sumcadeed iyo helitaanka khadadka amaahda ee deyn-bixiyeyaasha. Dhismaha dhibcaha ganacsiga ma fududa inaad adigu keligaa wax qabatid, laakiin caawimaad yar waxaad lahaan kartaa sumcadda shirkadeed kolba sidaad u malaysay. Waxaa jira dhowr waxyaabood oo laga fogaado iyo sidoo kale waxyaabo badan oo muhiim ah oo aan la iska indha tiri karin. Waxaan gacanta kuugu qabanaynaa oo aan kugu hagaynaa hawshaas murugsan.
Diyaarinta Nidaamka Dhismaha Deynta Shirkadeed
Waxaan diiwaangelinnaa nidaamka lagu dhisayo astaanta sumcadda ganacsiga, illaa iyo deyn bangi furan, kaararka deynta badan ee ganacsiga iyo dhowr khadadka amaahda ee iibiyaasha. Tani waxay dhamaantiis ku bilaabmaysaa gogol dhig u sameynta abuurista astaantaada deynta iyo habka dalabka ee amaah-bixiyeyaasha, adoo sameynaya dadaalkaaga saxda ah. Waa inaad hubisaa in meheraddaadu ay diyaar u tahay geedi socodka dhisida deynta - haddii aad bilaawdo adigoo aan howlahan qabin, waxaad halis u tahay inaad bilawdo ama xitaa kasii xumaato, waxaa kugu kallifaya sumcadda xun / khatarta sare ee wakaaladaha warbixinta. Waa muhiim in la fahmo oo la dhammaystiro tallaabooyinkan si loo dhiso astaanta sumcadda ganacsigaaga.
Tallaabada 1 - Raadinta Magaca Magac-bixinta Dunn iyo Bradstreet
Adigoo ka raadinaya D&B magacyada ganacsiga, waxaad si dhaqso leh u ogaan kartaa haddii ganacsiga leh isla magacaas uu leeyahay taariikh amaah. Adigoo adeegsanaya raadinta sareysa, waxaad weydiin kartaa xogta D&B keydka heer qaran. Waa maxay sababta raadinta Dunn iyo Bradstreet muhiim u tahay? Haddii aad dhammaystirtay hannaanka dhisidda amaahda ganacsiga oo aad goor dambe ogaatid in shirkad isla magacaas leh (laga yaabee in ay ku sugan tahay xaalad ka duwan) ay leedahay astaan ​​sumcad oo leh taariikh sumcad oo liidata ama halis sare leh, waad heli kartaa naftaada inaad ku guuleysato arrintaas marka. magaca shirkadda waa la baaray.
Raadinta Magaca & Ganacsiga D&B
Markaad xaqiijiso in magacaaga ganacsi uu gaar u yahay D&B, waad ku sii wadi kartaa habka dhisida astaanta sumcadda. Haddii aad hesho shirkad leh isla magac, waxaad tixgelin kartaa dib-u-habeynta diiwaannada shirkaddaada si aad u dhisto kredit hoos yimaad magaca hay'ad aan hadda la adeegsan.
Tallaabada 2 - Raadinta Magaca Helitaanka
Tallaabada xigta waa in laga hubiyaa magacaaga dhammaan hay'adaha dalka ka diiwaangashan. Tan waxaad ku sameyn kartaa adoo tagaya xoghaye kasta ama xafiiska komishanka, websaydhka ama xarunta wicitaanka oo hubi hubinta magaca, ama waxaad isticmaali kartaa aalad internetka. Waxaa jira aalado raadinta oo diyaar u ah diiwaannada amaahda iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale hay'adaha ganacsiga ee diiwaangashan. Raadintaan sahlan ayaa ku ogeysiin doonta haddii ay jirto hay'ad ganacsi oo kale oo diiwaangashan oo adeegsanaysa isla magaca gobol kale.
Raadinta waa in la qabtaa iyada oo aan la aqoonsan shirkad, taasoo la macno ah oo keliya magaca shirkada iyada oo aan la qorin "Inc", "LLC", "Limited", "Corp", iwm. Baaritaankaan, waxaad ku arki doontaa shirkaddaada liis gareysan oo waad arki kartaa macluumaadka diiwaanka dadweynaha, sida markii la aasaasay hay'adda, nooca iyo cinwaannada hay'adda diiwaangashan.
Tallaabada 3 - Hubinta Ku-Xadgudubka Astaanta Ganacsiga
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ka hubiso Nidaamka Raadinta Nidaamka Raadinta Elektiroonigga ah (TESS) si loo helo isku mid ahaanshaha magacaaga. Su’aal noocan ah ayaa guud ahaanba muujin doonta natiijooyin fara badan. Waxa aad geliso foomka waa la gooyaa lagana jajabinayaa kulanka ballaaran. Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso “Business Business”, waxaad arki doontaa natiijooyin ay ka mid yihiin “CU BIZSOURCE” oo aan lahayn 'sumcadda ganacsiga' magaca ama sharraxaadda alaabada iyo adeegyada, si kastaba ha noqotee 'ganacsiga' iyo 'amaah' yihiin, kuwaas oo soo bandhigi doona natiijo, xitaa iyada oo aan la helin ciyaar sax ah.
Nidaamka Astaan ​​Raadinta Elektiroonigga ah (TESS)
Astaamaha ganacsiga ayaa la diiwaangelin doonaa ama LIVE ama DEAD, kiiskan, waxaad dooneysaa inaad eegto summadaha tooska ah ee leh sumadda saxda ah ee magacaaga ganacsiga si loo hubiyo inuusan jirin wax khilaaf ah. Tixgal kale ayaa ah in calaamadaha calaamadaha loo qoondeeyo qaybo, sidaa darteed waxaad yeelan kartaa calaamad kalmad oo ka diiwaan gashanaysa warshadahaaga ama waaxdaada sidoo kale hay'ad kale ayaa iska diiwaangelin karta isla ereyga isku mid ah qeyb kale ujeedooyin kale.
Tallaabada 4 - Magaca Magaca Raadinta, Cinwaanka Websaydhka
Waa inaad ku diiwaangelisaa magaca shirkaddaada magac ahaan, doorbideysa ".com" kordhin. Hubi bixiye kasta oo diiwaangelin domain ah helitaanka magaca domain. Magacaaga domain waxaa laga yaabaa ama kuma soo dari karo aqoonsigaaga shirkadda. Waxaa loola jeedaa haddii magaca shirkaddaadu ay tahay “Maareeyayaasha ugu Wanaagsan ee Maareeyayaasha ah, Corp” waxaad raadin lahayd inaad iska diiwaangeliso “www.bestprojectmanagerscorp.com” ama beddelkeeda ah “www.bestprojectmanagers.com” ujeeddadan.
Diiwaangelinta Helitaanka Domainka Diiwaangelinta
Tani ma aha inay ahaato magaca aasaasiga ah ee ay shirkaddaadu u adeegsato ganacsiga. Iyadoo la raacayo tusaalaha kore, waxaad adeegsan kartaa magac kale oo magac domain ah, si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in magaca aad u dhisi doontid sumcad hoosteeda adiga laguugu diiwaangeliyay.
Tilaabada 5 - Liiska Tusaha Tilmaamaha Superpages
Hubso inaad liistada ganacsiga ku qoran tahay tusaha ganacsiga Superpages. Hadaadan sameyn, waxaad abuuri kartaa mid bilaash ah. Tani waxay qaadataa daqiiqado oo keliya wax kharash ahna kuma kici. Waad abuuri kartaa koonto kuna soo dari kartaa meheraddaada adoo raacaya xiriirka hoose. Haddii aad ka hesho meheraddaada, hubi inaad hubiso in macluumaadka la cusboonaysiiyay xiriiriyahaaga hadda jira iyo faahfaahinta goobtaada.
Liistada Tusaha Ganacsiga Superpages
Waxa jira dhowr ikhtiyaar oo ah ganacsigaaga in lagu qoro, ujeedokan, si fudud oo aad ku haysato magacaaga meheradda ee ku taal buugga macluumaadkaaga xiriirka ee hadda jira ayaa kugu filan.
Magaca Xalinta Khilaafaadka
Haddii magacaaga ay khilaafsan tahay mid ka mid ah jeegaga kore, waa inaad tixgelisaa inaad beddesho. Waxaa jira xulashooyin badan oo kuu furan, laga helo DBA, qodobbada wax ka beddelka iyo xereynta meherad ganacsi oo cusub. Waad u wici kartaa 1-800-Company waxaadna weydiisan kartaa sharikad iib ka iibisa inay kaa caawiso magaca shirkad cusub. Kahor intaadan dhameystirin magaca magac beddelka ama aad iska diiwaangeliso shirkad ganacsi cusub, waa inaad dhammaystirtaa tallaabooyinka kore si aad u xaqiijiso inaad si badbaado leh ula dhisi karto astaan ​​ganacsi oo ganacsi.
Ku sii wad Tallaabada xigta gudaha >> Dhismaha Buundada Shirkadaha - Ka wada hadalka Noocyada Shirkadaha Ganacsiga >>
Macaashka amaahda ee shirkadda
Xaaladda Maaliyadeed ee Shirkadda